प्रचण्ड भारत उडे, भन्छन्ः नरेन्द्र मोदीलाई सम्झाउनु छ !
ARCHIVE, POLITICS » प्रचण्ड भारत उडे, भन्छन्ः नरेन्द्र मोदीलाई सम्झाउनु छ !
काठमाडौँ – नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत प्रस्थान गरेका छन् ।
बिहीबार तीन दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका साथै भारतका उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनले आफ्नो भ्रमण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको मोदीको लगातारको नेपाल भ्रमणका भएका सहमति कार्यान्वयनको सुदृढ वातावरण बनाउनु भएको बताए ।
‘अर्को कुनै राजनीति एजेण्डा होइन । विकासको एजेण्डा र पहिले भएका सहमति र समझदारी, हिजो भारत सरकारले गरेका थुप्रै प्रतिवद्धताहरु छन्, त्यसको स्मरण गराउने विचार छ’ उनले भने, ‘चाहे संसदमा भारतका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा भनिएका हुन्, चाहे भूकम्पको सन्दर्भमा नेपालमा गर्ने सहयोग होस् ।’
प्रकाशित : Thursday, September 06, 2018